Maxay dad badan u aaminsanyihiin jirintaanka aragtiyada marin haboowsan? - BBC News Somali
Maxay dad badan u aaminsanyihiin jirintaanka aragtiyada marin haboowsan?
Buzz Aldrin ninkii dayaxa tagay
Waxaa aad u badan dadka aaminsan jiritaanka afkaaro marin habaabin ah, kuwaas oo aan runta sal ku lahayn, islamarkaasna dadka ay iska dhaadhiciyeen.
Waxaa tusaaleyaasha waaweyn ka mid ah in dad aad u badan ay aaminsanyihiin in madaxweynihii hore ee Maraykanka Gearge W Bush uu isaga maleegay qaraxyadii loo geystay daarihii dhaadheeraa ee New York, 2001-dii, taas oo ah aragti aan waxbo ka jirin, loona haynin wax cadeymo ah.
Waxaa kale oo jira in xoghayihii hore ee Maraykanka Hillary Clinton ay ka dambeysay afduub loo geystay carruur badan.
Haddaba maxay tahay sababta?
Prof Joe Uscinski oo ah qoraaga buugga American Conspiracy Theories ayaa sheegay in afkaarahan marin habaabinta ah ay jireen 100 kii sanno ee lasoo dhaafay.
"Qof kasta ood la kulanto waxa uu aaminsanyahay mid ama labo aragti oo kuwan oo kale ah, waxaana arrinkaas lagu ogaan karaa haddii la qaado daraasad" ayuu yiri
Daraasad ay sannadkii 2015-kii samaysay jaaamacadda Cambridge, waxa ay ku ogaatay in inta badan dadka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan ay hal aragti oo kuwan ah aaminsanyihiin. Waxa ay sheegeen in ay aaminsanyihiin in ay jiraan dad daaha gadaashiisa ka maamula waxa adduunyada ka dhacaya.
'Waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee dayaxa ku dul socdo''
"Marka aad wax badan u fiirsatid, waxaad arkaysaa in dad aad u kala duwan bulsho ahaan ay aaminsanyihiin aragtiyada marin haboowsan, xitaa dadka kala ah lab iyo dhediga" ayuu yiri Prof Chris French oo wax ka dhiga jaamacadda Goldsmith ee London.
"Dadka aaminsan in Bush uu burburiyay daarihii mataanaha waxa ay u badanyihiin kuwa taabacsan xisbiga dimoqoraadiga, kuwa aaminsan in Obama uu been abuuray waraaqdiisa dhalashada Maraykanka waxa ay u badanyihiin kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga" ayuu intaas sii raaciyay.
Obama ayaa shaaciyay warqaddiisa dhalashada 2011-kii
Aragtiyada ugu waaweyn ee lagu muransanyahay
In dayaxa la tagay dad ayaa u arka been abuur, waxaana ka dhashay in lagu xiiqo sidii loo sharixi lahaa in dhacdadaasi ay dhab tahay
Aragtidii ahayd ku xigeenkii nidaamkii Naasiyiinta Rudolf Hess markii xabsiga la galiyay lagu badelay nin u eg waxaa la ogaaday in uu isaga ahaa qofkii xabsiga ku dhintay kadib markii baaritaan lagu sameeyay hiddo-sidihiisii oo lala barbar dhigay hiddo-sidaha qof rag ah oo ay qaraabo ahaayeen.
Fanaaniintii Beyonce, Paul McCartney iyo Avril Lavingne dhammaantood waxa la aaminay in lagu badelay dad iyaga u eg, saxna ma ahayn taas.
Dad badan ayaa aaminsan in koox sheeydaanka caabbuda oo lagu magacaabo Illuminati ay maamulaan siyaasadda iyo dadka caanka ah ee adduunka.
Prof French waxa uu qabaa in cilmi nafsi ahaan ay dadka aaminaan waxyaabaha aan la arki karin ama aan la taaban karin, wax kasta oo dhacana waxaa la rumeysanyahay in cid uun ay ka dambeyso.
Gaar ahaan waxa ay dadka afkaarahan rumeystaan marka ay isku soo hagaagaan dhacdooyinka qaar, kadibna sheeko ayaa laga abuuraa.
Waxaa aad loo aaminaa waxyaabaha xunxun ee adduunka ka dhaca.
Siyaasadda maanta ee adduunka , waxaa aad u sahlan in la eedeeyo siyaasi, laguna eedeeyo wax uusan xitaa awoodeeda lahayn in uu xakameeyo.
Prof Larry Bartels oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt ayaa sheegay in dadka ay dowladaha ku ciqaabaan ama ku abaalmariyaan haddii ama haddiiba kale oo siyaasadaha dowladdaas ay qeyb ka qaadatay natiijada waxa dhacay.
"Tusaale ahaa weeraro libaax badeedyo ay ka geysteen gobolka New Jersey ee Maraykanka sannadkii 1916-kii, waxaa lagu eedeeyay dowladda" ayuu yiri , wuxuuna intaas ku daray in dadkii ay taageeradii kala laabteen madaxweyne Woodrow Wilson.
Qubarada waxa ay qabaan in aragtiyadan marin haboowsan ay ku badanyihiin hab fikirka siyaasadda ee dadka, iyada oo ay dadka maskaxdooda ka helaan in ay rumeeyaan waxa ay iyada jecelyihiin in ay runta yihiin.
Maxay u adkaatay in laga codeeyo Mareykanka?
Heeshiis Saddexaad oo xabad joojin ah iyo dagaalka Nagorno-Karabakh oo cirka isku shareeray
Australia oo Qatar u gudbisay cabasho ku aaddan "haween si foolxun loo baaray"